トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Wehelkaaga Xaggee baad joogtaa? Sida loo helo iyo sida ay u baaraan
Wehelkaaga of qaddar, tusaale ahaan, sababtoo ah waxaa inta badan waa caadi ah, sida hiwaayadaha la mid yihiin, in aad marar badan maqli warkii kulanka si fudud haddii Demuke meel ku raaxaysan hiwaayad ah. Sure, waxaan dadka congenial haddii aad u tagto meesha saas ah ka hor tago, laakiin waxaa khasab ma aha kulmi saaxiibkiisa naf.
lagama maarmaan ah si ay u daboolaan saaxiibkiisa nafta
ma aha inuu meeshaas tago, waa in mid ka mid waqti kasta ku qaatay goob in. Tusaale ahaan, xitaa u tageen inay meesha hiwaayad ku raaxaysan kartaa, halkaas oo haddii uu ka codsaday in uu la kulmo, waxa ay noqon doontaa ka wajibaadka asalka kala duwan. On lid ku ah, dadka ayaa loo maleynayaa inay ku raaxaystaan ??hiwaayad ee aan u eegin kulanka, waa u fududahay in ay la kulmaan saaxiibkiisa nafta.
Tani ayaa la sheegay in ay ku keento waxa ay noqotay daacad ah oo doonaya in ay iyaga u gaar ah. Haddii daacad ah ula dareenkaaga, waxa aan la in saaxiibkiisa nafta waxaa soo jiitay in nooca uu soo jiitay in ay.
naf saaxiibkiisa Sidee baad u fiirsado? In
, run ahaantii waxaan u malaynayaa in ay jirto si kasta si ay ula kulmaan saaxiibkiisa nafta.
? ogalaadaa naftayda
ah Tusaale ahaan, halkii ay kaliya marka noloshayda sida wanaagsan ugu socda, waxa uu noqon lahaa xaalado badan waxaa laga yaabaa ama xanuun uma shaqeeyo. Sidaas, oo ay ku jiraan dhinaca xun ma aha oo kaliya wanaagsan, aynu naftayda aqbalo. Sidaas waa ka baxo uuna nool yahay, waxay kaa caawin doontaa jiidan saaxiibkiisa naf. Haddii aad qabto
? iyo in uusan hadda ka shaqeeyaan
daran in ay duurka ballaaran of view, waxaa gabi ahaanba inta badan u diiday, maskaxdooda in. Si kastaba ha ahaatee, isaga iyo berrinkaba inuu balaadhan oo ah view by jiidaya hal talaabo ka xaaladda in, u yimid in ay u muuqdaan iyo dhacdo ayaa sidoo kale tanune waa wax ah hogaanka ku xigta. Ahayd fursadaha kala duwan muuqan haddii ay sidaa tahay, waa in aad aragto doorashooyin badan oo wadada si ay hadda ka socdaan.
si cad u leh image ee
? _x000 wehelkaaga D_
for saaxiibkiisa qofkaas waa in uu doonayo in uu la kulmo, oo ay leeyihiin image gaar ah oo cad oo ah, ayaa la sheegay in ay u badan tahay in ay la kulmaan. Marka aad ballaariyo fursadaha iyo berrinkaba balaadhan oo ah view, waxaad awoodi doontaa inaad si dareen qabsadaan xaqiiqda ah in ay jiraan dad ku dhow yahay inuu si cad u la images noqon doonaa.
wax shuba jacaylka inta badan waa ka fekeraan wax kaliya ee faa'iido iyo khasaaro, waxa isagu ama iyadu waa in soo horjeeda, waxaad u muuqdaan in ay ii malayn haddii noqo horjeeda sida badan. Si kastaba ha ahaatee, ma dhici karto sida jabsaday xataa saaxiibkiisa naf, waa in aad ku shub jacaylka free. Kaliya by in aad ka fikirto waxa aan sameyn karo si looga hortago in qofka kaa soo horjeeda inuu ku faraxsan yahay, waxaan qabaa inaan sidoo kale u Dhawaanina masaafada u dhexeysa saaxiibkiisa nafta.
nin aan ku nool yihiin waxaa muhiim ah
dheeraad ah, laakiin waxaan soo aragnay sida in ay la kulmaan ay isku naf, xataa haddii ku dhaqanka hab kasta, waxaa loo baahan yahay in ay tahay in maalin kasta Rashiku naftaada nool yihiin. saaxiibkiisa Soul waa sababtoo ah waa dhinaca kale in keenaysaa in nafta, haddii aan ku nool yihiin in uu ka tago si aan naftayda, Laakiinse nafta waa macquul hoose ee labada dhinacba soo jiitay in qofka.
in ay qaataan maalin walba noqdaan daacad ah ula naftayda iyo qalbiga, aad noqon karaa hab ugu dhow in saaxiibkiisa nafta.
By in aad ka fikirto, waxaan qabaa inaan sidoo kale u Dhawaanina masaafada u dhexeysa saaxiibkiisa nafta.